रात्री जीवन महिलाहरुलाई अश्लिलताको तक्मा - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
१नांगै भएर टीभी हेर्ने अभिनेत्रीको यस्तो अनौठो बानी
२यी हुन् सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड, कतै तपाइको त पर्दैन ! हेर्नुहोस्
३यस्तो छ आज पौष ०१ गते, आइतबार तपाईहरुको राशिफल
४यी हुन् सबैभन्दा सुरक्षित ५ कार, जसले दुर्घटनाको बेलामा बचाउछन् !
५यी हुन् बलिउडका कालो वर्णका कलाकार, कसरी भए एकाएक गोरो ? जान्नुहोस्
६सरकारले घटायो नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटको मूल्य !
७आजबाट विदेश जानेको बीमा रकम १ करोड ६० लाख, ब्यागेज हराए प्रतिकिलो ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति !
८यस्तो छ आज मंसिर २९ गते, शनिबार तपाईहरुको राशिफल
रात्री जीवन महिलाहरुलाई अश्लिलताको तक्मा
प्रकाशित मिति : बुधबार, बैशाख ३०, २०७२
कुरा सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर त्यही गएर देखेका र भोगेकालाई भने यो कुरा अनौठो नलाग्न पनि सक्छ । व्यापार गर्ने व्यापारी, डन, बेरोजगारी, यौन व्यवसायी, आवारा, गुण्डाहरुको थलो मानिने रत्नपार्क र आसपासमा रहेका होटल, डान्स बारको नाम जति सुन्दा रमाइलो छ त्यति नै घिनलाग्दो पनि छ । धेरैथरी वस्तु सस्तोमा, धेरै मानिसहरुको थलो मानेर चिनिने रत्नपार्क अहिलेमात्र नभई निकै पहिलादेखि नै महिलाहरुलाई अश्लिलताको तक्मा भिराउन पछि परेको छैन । कुनै महिला आकर्षक पोशाक लगाएर हिँडेको होस् या छोटा लुगा लगाइ घुम्न आएका तन्नेरी हुन वा उमेर घच्केका महिला नै किन नहुन्, उनीहरुलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नेमात्र नभई अश्लिल शब्दहरु प्रयोग गरिहाल्ने जमात नै भटिन्छ ।
१७ वर्षदेखि रत्नपार्कमा मकै पोल्दै गरेकी सविना लामा भन्छिन–‘रत्नपार्क कहाँ राम्रा मान्छे बस्ने ठाउँ हो र ? यहाँ त यस्तै महिलाहरुलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गरी महिला यौनको पात्रमात्र सम्झने ठाउँ हो ।’ उनले रुँदै भनिन्–‘मेरो श्रीमानलाई उहाँहरुको साथीहरुले यौनक्रिडा गर्नका लागि डान्सबारकी एउटी युवतीलाई लिएर गएछन्, मेरो श्रीमानलाई मादक पदार्थ खुवाएर ती युवतीसँग यौनसम्र्पक गर्न लगाएछन् । त्यस दिनदेखि मेरो श्रीमानले सोही केटीलाई विवाह गरेर भारततिर गएर बसेका छन रे भन्ने सुनेको छु ।’ ‘यो रत्नपार्क र यहाँ संचालित यौन व्यवसायले कसैलाई सज्जन छोडिदिएन’ आँसु पुछ्दै उनले भनिन् । प्राय जसो भिडभाड त्यही रत्नपार्कमा यस्तो अमानविय क्रियाकलाप हँुदो सुरक्षाका लागि खटेका प्रहरी के गर्छन त अनुगमन गर्न आउँछन् कि आउँदैनन त ? एक चिया पसले श्यामसुन्दर महतले हाम्रो प्रश्नमा भने–‘एकदिन गरेर के हुन्छ ? यहाँ सबैको सेटिङ हुन्छ ।’
यता डान्स बारमा काम गर्नेहरुको हालत पनि उस्तै छ । काठमाडौं पुतलीसडकको डान्स बारमा भेटिएकी रामेछापकी कमला मगर भन्छिन्–‘यो हाम्रो रहर होईन, पढेकी छैन, जागिर पाईंदैन । साथीले खानलाउन पनि पाईने र कमाई पनि रामै्र हुने भनेर ल्याएकी यस्तो प¥यो, अहिले त बानी परिसक्यो ।’ उनी भन्छिन् । वि.एड अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक शर्मा डान्स बारका ग्राहकमध्ये पर्छन् । उनी भने नेपालमा रेड लाईट एरिया आवश्यक भैसकेको बताउँछन् । उनले आफ्नो साथीले हप्तामा एक दुईवटा युवतीसँग यौनसम्र्पक गरेको बताए । रत्नपार्कको शौचालय, बाथरुमजस्ता सार्वजनिकस्थल मै यौनसम्पर्क गरेको बताए । उनले भने–‘पैसा दिएर लैजान्छन्, पहिला फकाउँदा हजार, पन्ध्र सय दिन्छु भनेर एडभान्सको रुपमा ५०० जति दिई लैजाने पछि यौनसम्पर्क गरेपछि पिटेर त्यही ५०० मै टार्ने गरेको धेरै बताउँछन् उनी । ‘मेरो साथीले पनि त्यसै गर्छ रे’ उनले भने ।
यसरी दिन दहाडै यस्तो क्रियाकलाप हुँदा न कसैको ध्यान गएको छ न अहिलेसम्म जान सकेको नै छ । महिलाहरुको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने संघ–संस्था के गर्छन त ? यसरी महिलाहरु पनि अमानविय कार्य गर्छन रे नी हो भनेर रत्नपार्कमा पानी बेच्दै दिन चलाएकी रजनी भन्छिन–‘बिचरा के गरुन् त ? पढेलेखेको भनेर जागिर पाईंदैन, काठमाडौको महँगो भाडा तिर्नै प¥यो, खानै प¥यो अनि त्यस्तो काम नगरेर पनि त के गरुन ।’ गाउँ घर जाउँ कमाउन गएकी थि फर्केर लुरुक्क आइछे भन्छन भन्ने डरले मरेतुल्य भएर पनि त्यस्तो काम गर्ने गरेको उनले बताईन । कस्ता महिलालार्ई त्यस्तो यौनसम्पर्कको प्रस्ताव राख्छन होला त ? हाम्रो प्रश्नमा प्रायः रत्नपार्कमा देखा परिरहने सृजन (नाम परिर्वतन) ले भने–‘खै कस्तालाई के देखेर जिस्काउँछन मलाई त थाहा छैन । एकदिन बहिनीसँग रत्नपार्क डुल्न आउँदा ‘के एक जनाको मात्र अंगालोमा हाम्रो अंगालोमा आए पनि त हुन्छ नि मैंयाँ’ भन्दै जिस्काए । झगडा के गर्नु बरु बहिनीलाई नै घर पठाइदिएँ ।’ उनले दुःखेसो पोखे । ‘दिदीबहिनीसँग घुम्न आउँदा पनि आफुलाई केटी घुमाउने दलाल सम्झनु पर्ने ठाउँ भएको छ रत्नपार्क ।’ उनले मलिन मुहारमा भने । यसरी महिला माथि शोषण–दमन भइरहँदा नेपाल सरकारबाट पनि उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । अनि महिलाहरुको हक, अधिकार र महिलाका मुद्दालाई लिएर र न्याय दिँदै हिँड्ने संघ–संस्थालाई भने यसले चुनौती दिएको छ ।
काठमाडांै बागबजार निवासी तर प्राय रत्नपार्कको प्रागण्डमा भेटिने सुबोध भट्राई भन्छन–‘यो कुनै अनोठो कुरा नै होइन । यो त रत्नपार्क धुम्न आउने, जिस्काउन आउने, समय काट्न आउने व्यक्ति प्रायः सबैलाई थाहा छ । रत्नपार्क एउटा यौनधन्दाको आर्कषण घर हो । यहाँ जसले जे गरेनी हुन्छ । बषौंदेखी रत्नपार्कमा यस्ता क्रियाकलाप भइरहेको हुन न नेपाल प्रहरीको निगरानी छ न कोही सरोकारवाला निकाएको नै त्यसैले त भन्छन यो देश सतिले सरापेको भनेर ।’
महिला मानवअधिकार राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष रेणु राजभण्डारी भन्छिन–‘खै त्यस्ता क्रियाकलाप त्यहाँ हुन्छन भन्ने थाहा छैन न कसैको कुराबाट नै सुनेका छौं । काठमाण्डौको मुटुजस्तो ठाँउमा त्यस्तो क्रियाकलाप हँुदा पक्कै पनि हामीले सुन्न पर्ने हो, खै अहिले सम्म न देखेका छौं न सुनेका नै छौं । त्यस्तो भएको थाहा पाए र सुने प्रशासनको मद्दत लिएर त्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाए दिन्छांै ।’
प्रहरी अपराध महाशाखाकाब डि.एस.पि सुरेन्द्र शर्मा भन्छन–‘त्यस्तो क्रियाकलापको बारेमा हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन । यदी त्यो क्रियाकलाप भएको थाहा पाए कारवाहीको दायरामा हामी लिएर आउछौं । यदि प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि त्यस्तो अमानविय क्रियाकलाप भएको थाहा पाए कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारवाहीमा लैजान्छांै । यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेरी छिटो भन्दा छिटो निगरानी समेत राख्छौं ।’
गोरखाका सय पर्यटकीय गन्तव्य : मनकामना, गाेरखा दरबारसहित उत्तरी गाेरखाकाे चुम भ्याली
नेपालकै क्रिकेट रंगशाला !! तस्बिर नै छ यति सुन्दर
भोटिङमा मिस वर्ल्डको अग्रता लिँदै नेपालकी श्रृंखला खतिवडा (यसरि गर्नुहोस् भोट)
दीपावलीको साँझ यस्तो देखिएको थियो पोखरा: निकै शान्त, अनि निकै सुन्दर (फोटो फिचर)
हेर्नुहोस चक्रपथका यी ५ तस्बिरहरु, अब तपाइलाई लाग्ला म नेपाल हैन विदेशमा छु !!
मर्नु अघि पुग्नै पर्ने नेपालका यी ५ ठाउँ !! जाने हैन त यो दशैँमा !!